Ixesha kunye nabahlobo 52
Yintoni ehlekisayo, kwaye kutheni abantu behleka?
Ukuhleka kukubonakaliswa kwesimo sengqondo kunye neemvakalelo ngokudalwa kwezandi zezandi. Emntwini kunye kwimeko leyo ibangela ukuhleka kwakhe, kuxhomekeke kuhlobo kunye nohlobo lokuhleka; Njengomatshonisa, istop, igorila, yolutsha elula kwaye inekratshi; umntu oqabileyo, oononkala, okanye ohlekisayo ukuhleka usulu, usigculelo, isigculelo, isithukuthezi, ugculelo, ingcikivo. Emva koko kukho ukuhleka okulisikizi komhanahanisi.
Ukuhleka siqinisekile sisalathiso somlinganiswa kunye nokudityaniswa komzimba nengqondo yalowo uhlekayo, njengoko intetho sisalathiso sophuhliso lwengqondo elinika ukucaciswa. Ukubanda entloko, ukuqaqanjelwa ngumzimba, okanye okunye ukugula emzimbeni, kunokuphelisa ukugcwala kunye nokujikeleza kokuhleka, kodwa loo miphumo yomzimba ayinakuwufihlisa umoya kunye neempawu ezingena kulolo hlaselo.
Iintshukumo zomzimba zokuhleka zibangelwa isenzo seentambo zezwi kunye nomsindo kumandla omoya ngaphezulu kwabo. Kodwa isimo sengqondo ngexesha lokuhleka sinika umoya uhleko, kwaye ke isebenze kwinkqubo yovalo njengokunyanzela amandla emisipha kunye noguquko lwelizwi njengoko kuya kunika umzimba kunye nomgangatho kwisandi ekuwo umoya wokuhleka iveziwe.
Njengemimangaliso emininzi yobomi, ukuhleka kuxhaphake kangangokuba akubonwa kungummangaliso. Kuyamangalisa.
Ngaphandle kwengqondo akukho nto yokuhleka. Ukuze ukwazi ukuhleka umntu kufuneka ube nengqondo. Isidenge senza ingxolo, kodwa asinakuhleka. Inkawu inokulinganisa kwaye yenze ubuhle, kodwa ayinakuhleka. Iparothi inokulinganisa izandi zokuhleka, kodwa ayinakuhleka. Ayazi ukuba izama ukuhleka ntoni; kwaye wonke umntu waselumelwaneni uyazi xa iparothi ilingisa ukuhleka. Iintaka zingabhabha kwaye zibhabhe kwaye zityatyambile elangeni, kodwa akukho kuhleka; iikati kunye neelekese zinokucoca, ziqengqele, zixakeke okanye zithambe, kodwa azikwazi ukuhleka. Izinja kunye neenciniba zinokuntywila kwaye zixhume kwaye zikhonkotha kwimidlalo yokudlala, kodwa azinikwanga ukuba zihleke. Ngamanye amaxesha xa inja ijonge ebusweni bomntu ngento ebizwa ngokuba "bubukrelekrele obunjalo" kunye nento ebonakala ngathi iyinkangeleko yokwazi, kuthiwa mhlawumbi uyakuqonda ukonwaba kwaye uzama ukuhleka; kodwa akanakho. Isilwanyana asinakuhleka. Ezinye izilwanyana ngamanye amaxesha zinokulinganisa isandi selizwi, kodwa oko asikokuqonda amagama. Inokuba yi-echo kuphela. Inja ayinakuqonda intsingiselo yamagama okanye ukuhleka. Ngcono unokubonakalisa umnqweno wenkosi yakhe, kwaye kwinqanaba elithile aphendule kuloo mnqweno.
Ukuhleka kukubonakalisa okuzenzekelayo bokuba noxabiso ngokukhawuleza kwengqondo, kwimeko ekutyhila ngequbuliso into yokungafezeki, ukungathandeki, ukungafaneleki, ukungalungisi. Le meko ibonelelwa kwenzeka, okanye isenzo, okanye ngamazwi.
Ukufumana isibonelelo esipheleleyo sokuhleka kwaye ukwazi ukuhleka ngokulula ngengqondo kufuneka, ukongeza ngokukhawuleza ukuqonda ukungahambelani, ukungafundeki, ukungalindelekanga kwemeko. Uphuhlise ubuhlakani bayo bokucinga Ukuba akukho ngqondo, ingqondo ayiyi kubona ngaphezulu kwemeko enye, kwaye ngenxa yoko ayinalo uxabiso lokwenene. Kodwa xa kukho ukucamngca kwengqondo iya kukhawuleza ibonakale kuloo nto ivela nezinye izinto ezihlekisayo kunye neemeko kwaye inxibelelanise ukungalungisi ngokuvisisanayo.
Abanye abantu bayakhawuleza ukuyiqonda imeko, kwaye babone ukuba yeyiphi na. Abanye banokuyiqonda le meko, kodwa ngaphandle kwengqondo abanakuyibona le meko inokucebisa okanye ikhokelele kuyo kwaye inxulumene nantoni, kwaye bayacotha ukubona inqaku likwinto ehlekisayo okanye imeko ehlekisayo kunye nexesha lokufumana isizathu abanye abantu bayahleka.
Ukuhleka kuyinto eyimfuneko ekukhuleni komntu, kwaye ngakumbi kuphuhliso lwengqondo lokuhlangabezana nazo zonke iimeko zobomi. Kukho ukuhleka okuncinci ekugayeni uxinzelelo lwe-monotonous kunye nobunzima. Xa ubomi bufuna umzabalazo othe rhoqo wokufumana ubuntu obungenanto, xa imfazwe kunye nokudodobala komhlaba kubhuqa umhlaba, xa ukufa kuvunwa ngomlilo ngomkhukula nangenyikima yenyikima, ke kuphela ezoyikiso nobunzima kunye nobunzima bobomi bubonwa. Iimeko ezinjalo zikhupha kwaye zinyanzele ukunyamezela kunye namandla eengqondo kunye nokukhawuleza isenzo. Ezi mpawu zengqondo ziphuhliswa ngokujamelana kunye nokuhlula iimeko ezinjalo. Kodwa ingqondo ikwafuna ukukhululeka nobabalo. Ingqondo iqala ukukhulisa ukuzonwabisa, ukukhululeka, ubabalo, ngokuhleka. Ukuhleka kubalulekile ukuze ube lula kwaye ubabalwe ingqondo. Nje ukuba kubonelelwe ngezinto ezinqabileyo zobomi, kwaye ziqale ukunika indawo yokutya, ukuhleka kuyeza. Ukuhleka kwenza ingqondo ingabhaduli kwaye kususa ubulukhuni bayo. Ukuhleka kunceda ingqondo ukuba ibone ukukhanya kwaye ichwayite ebomini, kunye nobumnyama kunye nokubanda. Ukuhleka kunciphisa ingqondo kubunzima emva komzabalazo wabo ngezinto ezinobuzaza, ezinzima kunye ezimbi. Ukuhleka kulunga ngengqondo entsha. Ngokufumana amandla okuhleka, ingqondo inokuvuselela amandla ayo kwaye ihlangabezane nobunzima, ithintele ukunyibilika komzimba kunye nokuhlanya, kwaye inokuhlala ihambisa ukugula okanye isifo. Xa indoda inikezela ingqalelo kakhulu ekuhlekeni, ke ukuthanda ukuhleka kuyayithintela ekubuxabiseni ubunzulu, uxanduva, uxanduva kunye nomsebenzi wobomi. Indoda enjalo inokuba lula kwaye ibe nobubele kwaye ilungile, inokubona icala lezinto ezihlekisayo, kwaye ibe ngumntu odlulayo, olungileyo. Kodwa njengoko eqhubeka esenza ukuhleka kube mnandi, uyathamba kwaye angakufanelekeli ukuhlangabezana nezinto eziyinyani zobomi. Ingasikwa yimfesane kwaye ihlekise ngendoda ecinga ukuba ithathe ubomi obunzulu kakhulu, sekunjalo iyabuqonda kwaye iyabuxabisa ubomi obungcono kunalowo uqhubeka nobomi ethwele intliziyo enzima kwaye enomthwalo wofrown.
Ubuninzi bendoda bomntu bunokwaziwa kwixesha elifutshane ngokuhleka kwakhe kunamazwi akhe, kuba uzama ukungafihli kwaye unokufihla okuncinci ekuhlekeni kwakhe. Ngamazwi unako kwaye uhlala echaza into eyahlukileyo kwinto ayithethayo.
Kunqabile ukuba nabani na angabamkeli abazizityebi, abanesandi esipheleleyo, bahleke ngokuvakalayo benombulelo ongazenzisiyo kunye nokuhlekisa okuhle okubekwe kumthamo kunye nethoni ukuze kulungele ukwenzeka kunye nendawo, kwaye ngubani na oya kuthi asilele ukunqabela ukugcadazela okungenanto Umntu oquphayo ngokunyanzela engxoweni yakhe okanye kwibhabhu, nokuba lithe kanti eso sehlo siyakusixhokonxa. Nokuba umntu akakho mhle okanye akaphilanga, ukugcwala okanye ukunqabiseka kwengqondo okanye iimvakalelo zinokwaziwa ngokuhleka kwakhe. Abo banotyekelo lokunxunguphala, fits okanye i-hysteria, baya kubabonisa ngokugcwala kwabo okufutshane, ii-spasmodic gasps, okanye ukukhala kwabo okude, okubukhali, okubhobozayo. Izandi ezinengxolo, ezijijayo, izandi zensimbi, imingxunya, uncuthu, zibonisa umlingiswa ngokuqinisekileyo njengokuba umlinganiswa onomzuliswano obonakalayo etyhilwa ngokuhambelana kwawo ekuhlekeni. Ukuhlekisa kuhlekisa kubonisa uphuhliso oluhlengahlengisiweyo kubalinganiswa, akunandaba nokuba kunjani na ukuhleka. Iimpawu zokulahla ukuhleka zibonisa ukunqongophala komlingiswa, nokuba umntu angazama kangakanani ukukufihla oko akushiyekileyo. Iilahla zinika indawo yokuvumelana ekuhlekeni, njengoko umlinganiso uphuhliswa. Ithoni, iphimbo kunye nomthamo wesahluko ekuhlekeni, bonisa ukunqongophala okanye ukujiya kuphuhliso lwabalinganiswa.
Umntu onemagneti kukuhleka kwakhe udla ngokuba yenye yendalo. Onobuqili, nobuqili, imposiso, nabakhohlakeleyo, bayakuphoxisa ukuhleka kwabo, nangona banokurhwebesha, ngenkohliso ngamazwi abo.